Qiimaha dhoofintu wuxuu ku xidhan yahay habka aad u dooratay inaad alaabta ku hesho. Express sida caadiga ah waa kan ugu dhaqsiyaha badan laakiin sidoo kale ugu qaalisan. Baabuurta xamuulka qaada ayaa ah xalka ugu fiican ee xaddi badan. Qiimaha xamuulka sida saxda ah waxaan ku siin karnaa kaliya haddii aan ogaano faahfaahinta cadadka, miisaanka iyo habka. Fadlan nala soo xidhiidh wixii macluumaad dheeraad ah.